घरमै बसेर मनपरेको कपडा मगाउनुहोस् !
विराटनगर ९ असोज । तपाइलाई बजारमा गएर किनमेल गर्ने फुर्सद छैन वा झन्झट लाग्छ ? चिन्ता नगर्नुहोस, रोजेको कपडाका बिभिन्न आइटमहरु घरमै बसेर फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट मगाउन सक्नुहुनेछ ।
गुणस्तरिय रेडीमेड कपडा तथा फेन्सी सामानहरुको लागि विराटनगरमा संचालन भएको ‘वि टाउन फेशनवेयर’ स्टोरबाट ग्राहकले घरमै बसेर फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट अर्डर गरेर मनाउन थालेका छन् । सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय जेन्स कपडाका आइटमहरु र इन्टरनेटको माध्यमले रोजाईको कपडा घरमै आइपुग्ने भएकोले ‘वि टाउन फेशनवेयर’ स्टोर विराटनगरमा चर्चित बन्दै गएको छ ।
विराटनगरको चुलाचुली मार्गमा संचालन हुँदै आएको ‘वि टाउन फेशनवेयर’ स्टोर हाल वार्ड नं ३ नोबेलडेरी चौकमा सारिएको छ । अनलाइन अर्डर मार्फत नेपालभरिका ग्राहकले घरमै बसेर रोजाईका समानहरु खरिद गर्ने गरेको संचालक सुमन खडका बताउँछन् । यो स्टोरमा जारा, पुल एण्ड बियर, नेक्स्ट, स्प्रिंग जस्ता विभिन्न ब्राण्डका टिसर्ट, पेन्ट, ज्याकेट , समर वेयर तथा चस्मा, ब्रासलेट, टप जस्ता अन्य फेन्सी आइटमहरु पाईन्छन् ।
यहाँ पाउने कपडा तथा सामानहरु गुणस्तरीय र सस्तो पनि हुने भएकोले नेपालको विभिन्न ठाउबाट ‘वि टाउन फेशनवेयर’ स्टोरको फेसबुक पेज तथा इन्स्टाग्राम मार्फत ग्राहकहरुले मनपराएको सामग्री अर्डर गर्ने गरेको संचालक खड्काले वताए ।